Buy Elastic Waist Multi-pocket Ribbons Hip Hop Men's Harem Pant - Free Shipping & No Tax | WoopShop®
elastic ခါးဘက်စုံစက္ကူများ Hip-Hop အမျိုးသားများအတွက် Harem Pant
$45.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $83.99
အရွယ် XXL XXXL XL L M
XXL / အနက်ရောင် XXXL / အနက်ရောင် XL / Black က L / Black က M / Black က
Elastic Waist Multi-pocket Ribbons Hip Hop Men's Harem Pant - XXL / Black backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ပစ္စည်း: polyester,Spandex, လဲမှို့
အရွယ် ခါးအကျယ် (စင်တီမီတာ) hip အကျယ် (စင်တီမီတာ) ဘောင်းဘီရှည် (စင်တီမီတာ) ခါးလျှော့ပေါ့ (CM)
မှတ်စု: ဤသည်သည်အာရှအရွယ်ဖြစ်ပြီးဥရောပနှင့်ယူအက်စ်အရွယ်အစားထက် ၂-၃ အရွယ်ပိုငယ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် EU / US အရွယ်အစား M ကိုဝတ်ဆင်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏အရွယ်အစား XL သို့မဟုတ် XXL ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ လက်ဖြင့်တိုင်းတာသည်နှင့်အမျှ ၁-၃ စင်တီမီတာကွာခြားချက်ကိုခွင့်ပြုသည် (1cm = 3inch) ကွဲပြားခြားနားသည် ကွန်ပျူတာသည်အရောင်တူလျှင်ပင်ကွဲပြားသောအရောင်များကိုပြသနိုင်သည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအရောင်ခြားနားချက်ကိုခွင့်ပြုပါ။
XL mido 1.77 y peso 64 ကိုကြည့်ပါ
အများဆုံးဖြစ်နိုင်သည့်အရွယ်အစား - ပီတာတွင်မွေ့ယာခွန်အားအနည်းငယ်သာ
Spodnie စူပါ delikatny zapaszek jest ale myślęże zginie po praniu, rozmiar L na chłopca 170 နှင့် 60 ကီလိုဂရမ်
I mean... Wow... Actually I’m verry positively surprised. Never had the luck to get that much detail onaclothing before. Plus I am really tall and thin so most clothes wouldn‘t look that good. For me this was totaly worth the money.
Джогеры супер, доставка в рашку за неделю, а там пропали, ждал по итогу 28дней, качество норм, прилипает только что к ткане всякое, а так плотная и достаточно тёплая, талия на резинке, мне чутка велика но затянул шнур и все найс, лямки подрезал и затянул, уж слишком болтаются и до пяток... Брал на размер больше и не пригодал